प्रदेश १ मा आरडिटी र पिसीआर विधिबाट ६ हजार ७० को परीक्षण – Pradesh Network
Posted on April 29, 2020 July 16, 2020 Author pradeshnetwork	Comment(0)
विराटनगर, १७ वैशाख । प्रदेश १ मा आरडिटी र पिसीआर विधिबाट ६ हजार बढीको परीक्षण भएको छ । आज साँझ सम्म ६ हजार ७० जनाको परीक्षण भएको हो । कोरोना शंकास्पद १ हजार ८५ जनाको स्वाव संकलन गरिएको छ ।
आज सम्म २ सय ८१ महिला र ८ सय ४ पुरुषको नमूना संकलन गरिएको हो । नमूना संकलन गरिएका मध्ये २ महिला र २९ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये १ हसय ६१ म्हिला र ७ सय ६९ पुरुष गरि ९ सय ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
शंकास्पद व्यक्तिको नमूना संकलन गरिएको मध्ये १ सय २४ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । आरडिटी विधिबाट आजसम्म ४ हजार ९ सय ८५ जनाको एण्टीवडी परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
परीक्षण गरिएका मध्ये ८ सय २२ महिला र ४ हजार १ सय ५० पुरुष गरि ४ हजार ९ सय ७२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा आजसम्म ५ हजार ६ सय २ जना क्षमताको निर्माण गरिएको छ । आज मात्रै ७५ ओटा वेड थपीएको छ । क्वारेन्टाईनमा ४ सय ७६ महिला र १ हजार ७ सय ८२ पुरुष गरि २ हजार २ सय ५८ जना बसेका छन् ।
आज ६५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । होम क्वारेन्टाईनमा वस्नेको संख्या ६ हजार १ सय ४७ पुगेको छ । होम क्वारेन्टाईनमा १ हजार ७२ महिला र ५ हजार ७५ पुरुष बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा आजसम्म आईसोलेसनमा वस्नेको संख्या ३९ पुगेको छ । आईसोलेसनमा ५ महिला र ३४ पुरुष छन् ।
प्रदेश १ मा ८ सय २१ जनाको कोरोना परीक्षण
विराटनगर, ४ वैशाख । प्रदेश नं. १ मा पीसीआर र आरडिटीबाट ८ सय २१ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । र्यापिड डायग्नोष्टिक टेस्टबाट हिजोसम्म जम्मा ५ सय ५५ जनाको परीक्षण भएको छ । पीसीआर र आरडीटीबाट हिजोसम्म जम्मा ८ सय २१ जनाको परिक्षण भएको छ । परिक्षण गरिएका सवैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । जम्मा […]
कोरोना बाट आतंकित हुनु पर्ने अवस्था छैन : मन्त्री घिमिरे
विराटनगर २३ फागुन । प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोना भाईरसबाट आतङ्कित हुनु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभएको छ । भाईरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि उच्च सर्तकता अपनाईएको मात्रै भएकाले आतंकित भईहाल्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । विराट व्यापार संघले आज आयोजना गरेको होली मिलन कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । […]
विराटनगर, ८ चैत । विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि साप्ताहिक हाट बन्द गराएको छ । आज विराटनगर बि प्लट र शनिहाटमा लाग्ने बजार रोकेको छ । अब कुनै पनि हाट बजार अर्काे सूचना जारी नभएसम्मलाई बन्द गराएको बताईएको छ। ऋाज बिहान बि प्लटमा भने साप्ताहिक कपडा हाट बन्द गराउन नगर प्रहरीको टोली नै पुगेको थियो । कोरोना […]
जापान सरकारले उत्कृष्ट विभूषण रामचन्द्र पौडेललाई दिने